RW xasan cali khere Oo Booqday wasaarada Warfaafinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
muqdisho (mareeg News ) Rasul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta Booqosho gaadma ah ku tagay xafiisyada wasaarada warfaafinta.
Rasul wasaaraha oo Ujeedada booqashadiiisa aheeyd u kuur galida Habka shaqo ee wasaarada warfaafinta ay mid mid u galay xafiisyada wasaarada RWaasre kheeyre ayaa la kulmay Agaasimaha wasaarada Alcadaala agaasimaha Talafashinka qaran Jete iyo Qeeb badan oo kamid ah Shaqaalaha wasaarada warfaafinta.
Mt kheyre ayaa ku bogaadiyay shaqaalaha In ay hori usii wadaan shaqada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed.
kheyre” wasaarda warfaafinta waa wasaarada ugu muhiimsan wasaaradaha dalka ”
kheyre oo looga bartay kormeerada gaadmada ah wasaarada badan hori ugu tagay ayaa maanta Tagay Wasaarada warfaafinta.